Ungawunyanzela njani uhlaziyo lwamva nje lwe- Android Auto | Iindaba zeGajethi
Ulufumana njani uhlaziyo lwamva nje lwe-Android Auto
U-Eder Esteban | | ngokubanzi
Ekupheleni kukaJulayi ingxelo entsha ye-Android Auto yabhengezwa. UGoogle usishiya nohlaziyo apho sifumana khona utshintsho oluninzi. Kwakusekupheleni kwenyanga xa yayiqala ukuthunyelwa, nangona oku bekuyinxalenye, kuba abasebenzisi abaninzi basalinde ukufumana le nguqulo intsha ngokusemthethweni kwaye abazi ukuba iza kufika nini.
Yintoni enokwenziwa kwezi meko? Kukho indlela yokuba Uyakwazi ukunyanzela uhlaziyo lwe-Android Auto, Ukonwabela olu hlobo lutsha nje. Licebo elilula, elinokuthi kwiimeko ezininzi lisebenze, ke awunyanzelekanga ukuba ulinde uGoogle ukuba ayikhulule.
Abasebenzisi abaninzi bebelinde iiveki fumana uhlaziyo lwe-Android Auto. Kodwa okwangoku i-OTA ayikhange isasazwe kwihlabathi liphela, okanye hayi ngendlela elindelweyo, ukuze abaninzi basenokungakwazi ukufikelela kolu hlobo lutsha. Ngethamsanqa, unokuyinyanzela kwaye ngenxa yoko akufuneki ulinde ixesha elide. Kuya kufuneka usebenzise usetyenziso kwifowuni ye-Android koku.
Ngaphakathi kwesicelo kufuneka nqakraza kwi icon kwikona ephezulu ngasekhohlo kwaye emva koko ufake useto (uqwalaselo) lwesicelo. Apho kuya kufuneka ujonge ukhetho olubizwa ngokuba yi «Zama iAustralia Auto entsha«. Olu khetho luya kusinceda ukunyanzela uhlaziyo.
Ngokuzenzekelayo ihlala ikhubazekile kwi-app. Ke ngoko, into ekufuneka siyenzile kule meko kukuvula olu khetho, sivule iswitshi ecaleni kwayo. Nantsi into eya kunyanzela usetyenziso fumana ingxelo yokugqibela efumanekayo, ezakuba yileya yasungulwa ekupheleni kukaJulayi.
Ke kufuneka silinde kancinci, de sizokufumana le Android Auto ngokusesikweni. Ngale ndlela, sinokuyonwabela ingxelo entsha, nayo yonke imisebenzi kunye nophuculo oluza nayo. Liqhinga elilula, njengoko ubona, kodwa kwiimeko ezininzi inokusebenza kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ulufumana njani uhlaziyo lwamva nje lwe-Android Auto
I-Android Q iya kubizwa ngokuba yi-Android 10 isivalelisa kwiidessert: sijonga onke amagama eelekese ozisebenzisileyo
IXiaomi isungula iMi 9T Pro eSpain nakwamanye amazwe